ESI EMECHIE IHE NGOSI NVIDIA KAADỊ NA AMD (ATI RADEON) - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
Esi emechie ihe ngosi NVIDIA kaadị na AMD (ATI RADEON)
N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị na-eme egwuregwu ga-ekpuchi kaadị vidiyo: ọ bụrụ na ọpụpụ na-aga nke ọma, mgbe ahụ, FPS (ọnụ ọgụgụ nke okpokolo agba kwa nkeji) abawanye. N'ihi nke a, foto dị na egwuregwu ahụ na-aghọ nwayọ, egwuregwu ahụ akwụsịlatalata, ọ na-adị jụụ ma na-atọ ụtọ igwu egwu.
Mgbe ụfọdụ overclocking-enye gị ohere iwelie arụmọrụ ruo 30-35% (a ịrịba abawanye na-agbalị overclocking :))! N'isiokwu a, achọrọ m ịnọ na-eche banyere otu esi eme nke a nakwa banyere nsogbu ndị na-ebili na nke a.
Achọrọ m ịkọ ozugbo na overclocking otu na-adịghị mma, na arụmọrụ arụmọrụ ị nwere ike ịkwakọrọ ngwá (na-abụghị, nke a ga-abụ ịjụ nke ọrụ ikike!). Ihe niile ị na-eme maka isiokwu a na-eme na gị onwe gị na egwu na n'ihe ize ndụ ...
Tụkwasị na nke a, tupu ịmechaa, ana m achọ ịkwado ụzọ ọzọ iji mepee kaadị vidiyo - site na ịtọ ntọala ọkwọ ụgbọala kachasị mma (Ịtọ ntọala ndị a - ị gaghị etinye ihe ọ bụla n'ihe ize ndụ.) Ọ ga-ekwe omume na ịtọ ntọala ndị a - ọ gaghịkwa adị mkpa ka ị gbanye ihe ọ bụla). Banyere nke a na m blog e nwere di na nwunye nke isiokwu:
- maka NVIDIA (GeForce):
- maka AMD (Ati Radeon):
Mmemme ndị dị mkpa iji kpuchie kaadị vidiyo
Na n'ozuzu, enwere otutu otutu ihe eji eme ụdị ihe a, ma eleghị anya, otu isiokwu na-anakọta ha niile bụ na ọ gaghị ezu :). Tụkwasị na nke ahụ, ụkpụrụ nke ọrụ dị otu ebe n'ebe niile: anyị ga-achọsi ike ịbawanye oge ncheta na isi (yana ịgbakwunye ngwa ngwa nju oyi ka mma). N'isiokwu a, m ga-elekwasị anya n'otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị ewu ewu maka overclocking.
Rivantuner (M ga-egosi ihe nlereanya m nke overclocking)
Otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma maka NVIDIA na ATI RADEON kaadị vidiyo, gụnyere overclocking! N'agbanyeghi na enweghi emelite ọrụ a ruo ogologo oge, o gaghi eme ka amara na mmata ya. Tụkwasị na nke a, ọ ga-ekwe omume ịchọta ntọala nchịkwa na ya: gbanye ọsọ ọsọ ọsọ ma ọ bụ kpebie nzagharị nke ntụgharị na-adabere na ibu dị ka pasent. Enwere ihe nyocha: nchapụta, ọdịiche, gamma maka ọwa agba ọ bụla. Ị nwekwara ike ịmepụta ụlọ ọrụ OpenGL na ihe ndị ọzọ.
Ndị mmepe: http://www.entechtaiwan.com/
PowerStrip (window window).
Ihe a maara nke ọma maka ịmepụta mpaghara mpaghara vidio vidiyo, kaadị vidiyo na-ekpuchi ma kpochapụ ha.
Ụfọdụ n'ime njirimara nke abamuru bụ: gbanwee mkpebi banyere ada, ịdị omimi, ọnọdụ ihu igwe, ịmegharị ọkụ na ọdịiche, ikenye gị ntọala ụcha na mmemme dị iche iche, wdg.
Ngwa ọrụ maka NVIDIA
NVIDIA Ngwaọrụ System (nke a na-akpọ nTune na mbụ)
A setị nke ụlọ ọrụ maka ịnweta, nlekota, na ịhazi usoro kọmputa, gụnyere ịchịkwa okpomọkụ na volta site na iji akara njikwa na Windows, nke dị nnọọ adaba karịa ime otu site na BIOS.
NVIDIA Inspector: windo mmemme isi.
Uru nke obere obere, nke ị nwere ike ịnweta ụdị ozi niile banyere NVIDIA ndị ntanetị arụnyere arụnyere na usoro.
Ihe nkesa X
Usoro mmemme dị oke mkpa maka overclocking na ịtọ kaadị vidiyo maka arụmọrụ kachasị elu. Na-arụ ọrụ na kaadị vidiyo site na EVGA, nakwa GeForce GTX TITAN, 700, 600, 500, 400, 200 dabere na ibe nVIDIA.
Ngwa ọrụ maka AMD
Ngwa AMD GPU
A bara uru maka overclocking na nyochaa arụmọrụ nke kaadị vidiyo dabere na Radeon GPU. Otu n'ime ndị kasị mma na klas ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite na-ekpuchi kaadị vidiyo gị, ana m akwado ịmalite ịmata ya!
Enwere ike zuru oke maka ikpuchi na ikuku nke kaadị si AMD. Site n'enyemaka nke usoro ihe omume ahụ, ị ​​nwere ike ịhazigharị ike ọkụ ọkụ nke GPU na ebe nchekwa vidiyo, nke ugboro ugboro, na-achịkwa ọsọ ọsọ nke ndị Fans.
ATITool (na-akwado kaadị vidiyo ochie)
ATI Ngwa Ngwa.
Mmemme maka ikpo okwu ọma na ikpochapụ AMD ATI Radeon kaadị vidiyo. Na-etinye na tray system, na-enye ngwa ngwa niile ọrụ. Na-arụ ọrụ n'okpuru Windows: 2000, XP, 2003, Vista, 7.
Ndị ọrụ eji eme nnyocha maka vidiyo
A ga-achọ ha iji nyochaa uru arụmọrụ nke kaadị vidiyo n'oge na mgbe ọ gasịrị, yana ịlele nkwụsi ike nke PC. Ọtụtụ mgbe, na usoro nke overclocking (ịzụlite ohere) kọmputa ahụ malitere ịkpa àgwà n'ezoghị ọnụ. Na ụkpụrụ, egwuregwu kachasị amasị gị, nke, dịka ọmụmaatụ, ị kpebiri ịgbaghara kalịnda vidiyo gị, nwere ike ịbụ usoro mmemme ahụ.
Nnwale ule vidiyo (ihe eji eme ihe maka ule) -
Usoro nke osooso na Riva Tuner
Ọ dị mkpa! Echefukwala imelite ọkwọ ụgbọala vidiyo na DirectX n'ihu overclocking :).
1) Mgbe ị wụnye ma na-arụ ọrụ ahụ Riva tuner, na windo windo nke usoro ihe omume (Main) pịa triangle n'okpuru aha nke vidiyo gị, ma na mpịakọta nkuku nke ihuenyo họrọ bọtịnụ mbụ (ya na onyinyo nke vidiyo), hụ nseta ihuenyo n'okpuru. Ya mere, ị ga-emepe ncheta na ntọala ugboro ugboro, ntọala maka ọrụ nchịkwa.
Ntọala nhazi maka overclocking.
2) Ugbu a, ị ga-ahụ na nkwụsị Nkọwapụta ugboro ugboro nke ebe nchekwa na isi nke kaadị vidiyo (na nseta ihuenyo n'okpuru, ndị a bụ 700 na 1150 MHz). Nanị n'oge osooso, oge ndị a na-abawanye na njedebe ụfọdụ. Iji mee nke a, ị chọrọ:
tuo igbe dị n'akụkụ Kwado ihe ngwaike ọkwọ ụgbọala;
na windo na-emepụta (egosighi) dị nnọọ pịa bọtịnụ Detect ugbu a;
site n'elu, n'akụkụ aka nri, họrọ na taabụ ihe arụ ọrụ 3D (site na ndabara, mgbe ụfọdụ, njedebe bụ 2D);
Ugbu a, ị nwere ike ịmegharị ugboro ugboro ka ọ dịkwuo ikikere iji mụbaa frequencies (ma mee nke a ruo mgbe ị na-eme ọsọ ọsọ!).
Meekwu okporo ụzọ.
3) Nzọụkwụ ọzọ bụ ịmepụta ụfọdụ uru nke na-enye gị ohere ijikwa okpomọkụ n'oge ezigbo. Ị nwere ike ịhọrọ uru ọ bụla site na isiokwu a:
Ozi sitere na Wizard PC bara uru 2013.
A ga-achọ ịba uru dị otú a iji nyochaa ala nke kaadị vidiyo (okpomọkụ ya) n'oge na-enwewanye ụba. N'ikpeazụ, n'otu oge ahụ, kaadị vidiyo na-amalite ịmị ọkụ mgbe nile, usoro usoro oyi ahụ anaghị anagidekwa ibu ahụ mgbe niile. Ịkwụsị osooso n'oge (nke ikpe) - na ịchọrọ ịma ọnọdụ okpomọkụ nke ngwaọrụ ahụ.
Esi chọpụta ọnọdụ okpomọkụ nke kaadị vidiyo:
4) Ugbu a bugharịa ihe mmịfe ahụ na ebe nchekwa (Ncheta nche) na Riva Tuner gaa n'aka nri - dịka ọmụmaatụ, 50 MHz ma chekwaa ntọala (M na-achọpụta na nke mbụ, na-emekarị, emetụla ncheta ahụ, mgbe ahụ, isi.) A gaghị atụ aro ya iji mụbaa frequencies ọnụ!).
Ọzọ, gaa ule ahụ: ma malite egwuregwu gị ma hụ ọnụ ọgụgụ FPS n'ime ya (ole ọ ga-agbanwe), ma ọ bụ jiri pụrụ iche. mmemme:
ụlọ ọrụ maka vidiyo kaadị ule:
Site n'ụzọ, a na-elele ọnụ ọgụgụ nke FPS site na iji ọrụ FRAPS (ị nwere ike ịmụtakwu banyere ya na isiokwu a:
5) Ọ bụrụ na foto dị na egwuregwu ahụ bụ àgwà, ọnọdụ okpomọkụ adịghị agafe ihe njedebe (banyere ọnọdụ okpomọkụ nke kaadị vidiyo - ọ nweghịkwa arịa - ị nwere ike iweli oge ncheta maka 50 MHz na-abịa na Riva Tuner wee nwalee ọrụ ahụ ọzọ. na-akawanye njọ (mgbe mgbe, mgbe e mesịrị, e nwere mgbagwoju anya dị na foto a ma ọ dịghị ebe ọ bụla na-ekpuchi ...).
Banyere ihe odide na nkọwa ndị ọzọ ebe a:
Ihe atụ nke ihe ndị dị na egwuregwu ahụ.
6) Mgbe ịchọta uru dị ala nke ebe nchekwa ahụ, dee ya, wee gaa n'ihu ịba ụba ugboro (Core Clock). Okwesiri ka ichikota ya n'otu uzo ahu: nakwa n'obere ozo, mgbe o bawanye ule, nwalee oge obula n'ime egwuregwu (ma obu uru puru iche).
Mgbe ị ruru ókè maka kaadị vidiyo gị - chebe ha. Ugbu a ịnwere ike ịgbakwunye Riva Tuner ka ebudata ya ka ihe ndị a nke kaadị vidiyo na-arụ ọrụ mgbe ị na-agbanye kọmputa (enwere akara ngosi pụrụ iche - Mee ngwa ngwa na mmalite Windows, lee nseta ihuenyo n'okpuru ebe a).
Zọpụta ntọala n'elu.
N'ezie, nke ahụ dum. Achọrọ m ichetara gị na ị ga-enwe ike ịchọta ihe dị mma maka ikuku vidiyo na ike ya (mgbe ụfọdụ, mgbe a na-ekpuchi ya, ikike ike anaghị ezu).
Ihe kachasị, ma ghara ịsọ ọsọ n'oge mmego!